သုတဆောင်းပါးများဖတ်ရင်း စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် (၅) - Myanmar Network
သုတဆောင်းပါးများဖတ်ရင်း စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် (၅)
Posted by Myanmar Network on May 16, 2014 at 11:00 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
သုတဆောင်းပါးများဖတ်ရင်း စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် (၄) ၏အဆက်
ယနေ့ စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် အစီအစဉ်မှာ Lana Winter-Hebert ရေးသားထားသည့် 10 Benefits of Reading: Why You Should Read Every Day ကိုမှီးညမ်းရေးသားထားတဲ့ စာဖတ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး (၁၀) ခုအကြောင်းကိုရှင်းပြထားတဲ့ ဆောင်းပါးရဲ့ ဒုတိယပိုင်းကို ဖတ်ရှုပြီး မှတ်သားဖွယ် ဝေါဟာရအချို့ကိုလေ့လာကြပါမယ်။ ဘာသာစကားအနေနှင့်သာမက ဗဟုသုတပါရစေမဲ့ သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်လို့ပိုပြီးအဆင်ပြေစေဖို့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတစ်ပိုဒ် မြန်မာဘာသာတစ်ပိုဒ် ရေးပြထားပါတယ်။
6. Stronger Analytical Thinking Skills - Have you ever read an amazing mystery novel, and solved the mystery yourself before finishing the book? If so, you were able to put critical and analytical thinking to work by taking note of all the details provided and sorting them out to determine “whodunnit”.
6။ ဝေဖန်ဆန်းစစ် / ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာနိုင်တဲ့ တွေးခေါ်မှု ပိုမို ထက်မြက်လာခြင်း - သင့်အနေနဲ့ အံ့သြစရာကောင်းပြီး လျှို့ ၀ှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ ၀တ္ထုမျိုးကို ဖတ်ဖူးပါသလား? ဖတ်ဖူးရင်လည်း အဲဒီလျှို့ ၀ှက်ချက်ကို စာအုပ်ဖတ်လို့မပြီးခင် သင်ကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ဖူးပါသလား? လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ၀တ္ထုထဲကပါတဲ့ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်တွေကို ဂရုစိုက်ပြီး ဘယ်သူ တရားခံလည်းဆိုတာ သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ ၄င်းတို့ကို ရွေးချယ်ခွဲခြားရတဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ ဝေဖန်ဆန်းစစ်၊ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာတတ်တဲ့ စဉ်းစားနိုင်သော စွမ်းရည်ကို ပိုမိုထက်မြက်အောင် လုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
7. Improved Focus and Concentration - When you readabook, all of your attention is focused on the story—the rest of the world just falls away, and you can immerse yourself in every fine detail you’re absorbing. Try reading for 15-20 minutes before work (i.e. on your morning commute, if you take public transit), and you’ll be surprised at how much more focused you are once you get to the office.
၇။ အမြင်ပြတ်သားမှု နှင့် အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှုတို့ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာခြင်း - စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်တဲ့အခါမှာ သင့်အာရုံစူးစိုက်မှုသည် ဖတ်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းပေါ်မှာပဲ ရောက်နေ ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျန်တဲ့ အရာတွေဟာ သင့်အာရုံထဲကနေ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်။ သင်ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်ထဲမှာ သင့်စိတ်ကို နှစ်မြှုပ်ထားနိုင်တယ်။ အလုပ်မစခင် ၁၅-၂၀ မိနစ်ခန့် စာဖတ်ကြည့်ပါ။ (ဆိုလိုတာကတော့ မနက်အလုပ်သွားတဲ့အခါ အများသုံးယာဉ်စီးပါက - bus ကား၊ ရထားပေါ်မှာ စာဖတ်ပါ။) ရုံးရောက်တဲ့အခါ သင့်ရဲ့ အာရုံထက်မြက်လာတာကို သင့်ကိုယ်သင်တောင် အံ့သြနေပါလိမ့်မယ်။
8. Better Writing Skills - In the same way that musicians influence one another, and painters use techniques established by previous masters, so do writers learn how to craft prose by reading the works of others.
8. ပိုမိုကောင်းမွန်လာသော အရေးစွမ်းရည် - ဂီတပညာရှင်တွေဟာ အချင်းချင်း သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသလို၊ ပန်းချီဆရာတွေကလည်း ရှေ့ဆရာတွေရဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုရသလို စာရေးတဲ့သူတွေကလည်း တခြားသူတွေရဲ့ စာအရေးအသားတွေကို ဖတ်ပြီး စကားပြေကို ဘယ်လိုဖန်တီးသလည်းဆိုတာလေ့လာကြပါတယ်။
9. Tranquility - In addition to the relaxation that accompanies readingagood book, it’s possible that the subject you read about can bring about immense inner peace and tranquility. Reading spiritual texts can lower blood pressure and bring about an immense sense of calm, while reading self-help books has been shown to help people suffering from certain mood disorders and mild mental illnesses.
၉။ ငြိမ်သက်အေးချမ်းခြင်း - စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ကို ဖတ်လို့ရရှိလာတဲ့ စိတ်အပန်းဖြေမှုအပြင် သင်ဖတ်တဲ့အကြောင်းအရာက လည်း သင့်ရဲ့ အတွင်းစိတ်မှာ အေးချမ်းငြိမ်သက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်များကိုဖတ်တာဟာ သွေးဖိအားကိုကျစေပြီး လွန်စွာမှကြီးမားသော တည်ငြိမ်မှုကို ရစေပါတယ်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စာအုပ်တွေ (self-help books) ကို ဖတ်တာကတော့ တချို့သော စိတ်အာရုံမတည်ညိမ်မှုနဲ့ မပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ဝေဒနာအချို့ကို သက်သာစေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
10. Free Entertainment - Libraries have books on every subject imaginable, and since they rotate their stock and constantly get new books, you’ll never run out of reading materials.
၁၀။ အခမဲ့ဖျော်ဖြေမှု - စာကြည့်တိုက်တွေမှာ ဘာသာရပ်တိုင်းနှင့်ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ကြိုက်စာအုပ်တွေရှိပါတယ်။ ဒီစာအုပ် တွေကို လှည့်ပေးတဲ့အပြင် အမြဲပဲ စာအုပ်အသစ်တွေကို ၀ယ်ယူပေးနေတဲ့အတွက် သင့်အတွက် ဖတ်စရာတွေ ဟာ ကုန်သွားတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ စာဖတ်သူတိုင်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာစာအုပ်အမျိုးအစားတွေရှိပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဘယ်အမျိုးအစားကို ကြိုက်ပါသလဲ။ ဂန္ထ၀င်စာပေလား? ကဗျာလား? ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းလား၊ အထုပ္ပတ္တိလား၊ ဘာသာရေးစာပေ တွေလား? လူငယ်တွေအတွက်စာအုပ်လား? ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လမ်းပြစာအုပ်မျိုးလား? မြို့တွင်းဘဝသရုပ်ဖော်ဇာတ်လမ်းလား? အချစ်ဝတ္ထုလား? ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်ရဲ့ ပြင်းပြစွာစပ်စုလို့ စိတ်နှင့်စိတ်အာရုံကို ဖမ်းစားမဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကတော့ ရှိနေမှာပါ။ ဒါကြောင့် ကွန်ပျူတာရှေ့ ကနေခဏထလာပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖွင့်ပြီးတော့ စိတ်စွမ်းအားတွေကို ခေတ္တခဏဖြည့်တင်း လိုက်ပါ။
Analytical thinking skills - ဝေဖန်ဆန်းစစ် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာနိုင်သည့် တွေးခေါ်မှုအရည်အချင်း / Analytical thinking is the capacity to examine and break down evidences and opinions into their strengths and weaknesses. Developing the capacity to think inathoughtful, discerning way, to solve problems, analyse data, and recall and use information.
Mystery novel - လျှို့ ၀ှက်သည်းဖိုဝတ္ထု / Mystery isagenre of fiction in whichadetective, either an amateur oraprofessional, solvesacrime oraseries of crimes
Public transit - အများသုံးယာဉ် (ရထား၊ bus ကား စသည်) /apublic transportation system for moving passengers
Technique - နည်းလမ်း / နည်းပညာ / နည်းနိဿယ /a way of carrying outaparticular task, especially the execution or performance of an artistic work orascientific procedure
Stock - စာကြည့်တိုက်အတွင်းထားရှိသော စာအုပ်စုစည်းမှု / book collection in libraries (အခြား အနက်အဓိပ္ပါယ် များစွာလည်းရှိပါသည်)
Genre - အနုပညာ အမျိုးအစား / ဇာတ်လမ်း အမျိုးအစား /astyle or category of art, music, or literature
Street lit - မြို့တွင်းဘဝသရုပ်ဖော်ဇာတ်လမ်း / Urban fiction, also known as street lit, isaliterary genre set, as the name implies, inacity landscape.
Text source - http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/10-benefits-reading-why-...
သုတဆောင်းပါးများဖတ်ရင်း စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် (၁)
သုတဆောင်းပါးများဖတ်ရင်း စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် (၂)
သုတဆောင်းပါးများဖတ်ရင်း စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် (၃)
သုတဆောင်းပါးများဖတ်ရင်း စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် (၄)
သုတဆောင်းပါးများဖတ်ရင်း စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် (၆)
သုတဆောင်းပါးများဖတ်ရင်း စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် (၇)
သုတဆောင်းပါးများဖတ်ရင်း စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် (၈)
သုတဆောင်းပါးများဖတ်ရင်း စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် (၉)
Permalink Reply by Myo Myo on May 16, 2014 at 18:25
Permalink Reply by Nilar Aung on May 18, 2014 at 13:11